Maxaa ku soo kordhay doorashada Soomaaliya? midowga musharaxiinta oo dalka ka maqan iyo wararkii ugu dambeeyy – Bandhiga
Wakiilada Beesha Caalamka oo maalmihii ugudanbeeyay waday wadahadalo dhexdhexaadin ah oo ay ka dhax samaynayeen dhinacyada siyaasada isku haya ayaa markan muujiyay inay caqabado cusub kala kulmayaan dhinacyada gaar ahaan dawlada federaalka oo ku adkaysanaysa in aanu wadahadal furmi karin ilaa Puntland iyo Jubbaland ka soo gudbinayaan gudiyada doorashada.
ila muhiim ah ayaa dhanka kale sheegaya in arintan ay caqabad ku noqotay in la siiwado dadaalada loogu jiro inuu is faham dhaco, waxaana sidoo kale ad kaatay in kulanka la isla meel dhigo oo looqabto maalin la isku raacsan yahay.
Midawga Musharixiinta oobadankood safaro dibada ah ku maqan marka lagareebo Xasan Cali Khayre iyo Shariif Xasan oo Muqdisho kusugan ayaa dhankooda aan wali wax war ah ka soo saarin caqabadaha cusub balse waxay horey ugudbiyeen mawqifkooda ku aadan xal uhelida qodobada la Iskuhayo, wxayna ka digeen Firaaqa dastuuriga ah ee ka dhalan kara hadii sidaan lagu gaaro 8Feb. iyadoo aanay socon dadaal doorasho oo la isla ogol yahay.
Dhinaca kale Cabdi casiis Lafta gareen oo maalmihii ugu danbeeyay ku hawlanaa sidii ay isugu imaan lahaayeen dhamaan dhinacyada isdiidan ayaa maanta Safar ugu amba baxay Dalka Turkiga, iyadoo wali hawshii uu bilaabay aysan fari ka qodnayn.
Lafta gareen ayaan umuuqan inuu fuliyo rabitaanka Saaxiibadiis Villa Somaliya ay ku doonayeen inuu qabto doorashada, wuxuuna cadaadis badan uu kala kulmay Wakiilada Beesha caalamka iyo dhinacyada saamilayda siyaasada dalka.
Hadaba in kastoo ay mar walba caqabado hor leh imaanayaan ayay xubnaha beesha caalamku rajo kaqabaan in mar uun lagaari doono is fahan ka hor mudo xileedka madaxweyne Farmaajo, si ay taas uga dhabeeyaan wakiilka Qaramada Midoobay ayaa wali wada safaro uu xal ku raadinayo isagoo maanta usocdaalaya magalada dhuusamareeb wuxuuna horay ubooqday Qaar kamid ah Xarumaha maamul goboleedyada.
Lasoco wixii warar ah ee ku soo kordha Arimaha Doorashooyinka.